Displaying 71-80 of 194 results.
सर्लाहीमा पेट्रोल पम्पमा आगलागी, संचालकसहित चार घाइते
सर्लाही, १३ फाल्गुन । सर्लाहीको सुकेपोखरीस्थित ब्रदर पेट्रोल पम्ममा आगलागी भएको छ ।
आगलागीमा परेर तीन जना घाइते भएको छन् । घाइते हुनेमा पेट्रोल पम्प सञ्चालक हरिवन नगरपालिका–१० का नारायण मैनाली, करमैया–४ का प्रमोद साह, बारा अम
पूर्वमा पहिलोपटक माउन्टेन फ्लाइट, हिमशृङ्खलाको अवलोकन गराउने
मोरङ, १३ फाल्गुन । विराटनगरबाट शनिबारदेखि पूर्वका हिमशृङ्खलाको अवलोकन गराउने उद्देश्यले पर्वतीय उडान (माउन्टेन फ्लाइट) हुने भएको छ । विराट एक्स्पो आयोजक समिति तथा विराटनगरमा पर्यटनसँग सम्बद्ध सङ्घसंस्थाले पूर्वाञ्चलमै पहिलोपटक यती एअरलाइन्सको विमानबाट माउन्.. .. ..
जनकपुरमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक पुरोहितको मत्यु
जनकपुरधाम, १३ फाल्गुन । मोटरसाइकलको ठक्करबाट धनुषामा एक पुरोतोहितको ज्यान गएको छ । ज्यान जानेमा जनकपुर उप–महानगरपालिका–७ पुरोहित महेश पाण्डे रहेका छन् ।
जनकपुर ढल्केवर सडक खण्ड अन्तर्गत गएराति पूजा गराउन साइकलमा जनकपुरबाट महेन्द्रनगरतर्फ
बिराटनगरमा डोजरले बिद्यार्थी किचे, डोजर तोडफोड गर्दा प्रहरीसँग झडप
बिराटनगर, १२ फाल्गुन । सडक निर्माणको क्रममा डोजरले किचेर एक विद्यार्थीलाई घाइते बनाएको छ ।
महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा बिबिएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी उमेश कुमार यादव घाईते भएका हुन् । घाईते विधार्थी यादबको उपचार विराटनगरस्थित न्युरो अ
लागुऔषध नाईट्रोसन ट्याबलेटसहित दुई युवक पक्राउ
झापा, १२ फाल्गुन । झापा र मोरङ जिल्लाबाट अबैध लागु औषधसहित दुई युवक पक्राउ परेका परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरुमा झपाको दमक नगरपालिका ११ बस्ने २५ बर्षिय बेनु प्रसाद गौतम र सुनसरी महेन्द्रनगर ४ बस्ने २५ बर्षिय मिलन राई रहेका छन् ।
बिशेष सुचनाको आधारमा
सीके राउतको ब्यानर हाटाइरहेको फोटो खिच्दा सिरहामा प्रहरीबाटै पत्रकार कुटिए
सिरहा, ११ फाल्गुन । सीके राउतका कार्यकर्ताले सडकमा झुण्ड्याएको तुलब्यानर प्रहरीले हटाइरहेको तस्विर खिच्दा सिरहामा पत्रकार कुटिएका छन् ।
माउण्टेन टेलिभिजनका सिरहा सम्बाददाता सुरेन्द्र कामती भलुवाही चौकमा प्रहरीबाटै कुटिएका हुन् । डा. सीके रा
झापामा ब्राउनसुगरसहित दर्जी पक्राउ
झापा, ११ फाल्गुन । झापाको मेचीनगर नगरपालिका १२ जोरसिमलबाट लागूऔषधसहित एक युवक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा झापा शनि-अर्जुन नगरपालिका ९ का ३२ बर्षिय रिक वहादुर सोनाम दर्जी रहेका छन् ।
दर्जीलाई लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो काकडभिट्टाको टोलीले मं
सार्वजनिक समारोहमा मदिरा निषेध, २१ वर्षमुनिकाले किन्न पनि नपाउने
काठमाडौं, ११ फाल्गुन । सरकारले २१ वर्षमुनिकाले मदिरा किन्न नपाउने गरी ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति’ ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार पारित गरेको नीतिमा सार्वजनिक समारोह, विवाह, उत्सवलगायतमा मदिरा निषेध गरिएको छ ।
अवैध यौनसम्बन्धकै कारण श्रीमानको हत्या, पत्नीसहित ४ जनालाई थुनामा राख्न आदेश
महोत्तरी, १० फाल्गुन । स्थानीय हतिसर्वा गाविस–८ संग्रामपुर बस्ने २५ वर्षीय अञ्जनीकुमार मिश्रको हत्याको आरोपमा महोत्तरी जिल्ला अदालतले मृतककी पत्नीसहित चारजनालाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ ।
न्यायधीश केशवप्रसाद घ
चुनाव खर्चका लागि झण्डै साढे १० अर्ब निकासा, पूरक बजेट नआउने
काठमाडौं, १० फाल्गुन । सरकारले स्थानीय तहको चुनावका लागि १० अर्ब भन्दा बढीको खर्च निकासा गरेको छ । यो निर्णयसँग अब सरकारले तयारी गरिरहेको पूरक बजेट नआउने निश्चित भएको छ ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ५ सय ७